အသည်းကွဲနေပေမဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့ သိက္ခာမကျအောင်နေပါ
အသည်းကွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကြောင့် သိက္ခာမကျရအောင် ဒီလိုတွေဆင်ခြင်ပါ။
ခုခေတ်မှာ တစ်ယောက်ယောက် အသည်းကွဲပြီဆို သိပ်သိသာတယ်။ သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် ဘယ်လိုတွေချစ်တာ၊ ဘယ်လိုတွေလွမ်းတာ အစချီတဲ့ ပုံတွေစာတွေ မနည်းမနောပဲ။
သိပ်မကြာပါဘူး နောက်တစ်ယောက်ရသွားပြန်ရော။ ကိုယ်တိုင်ကအစ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဒိုင်ယာရီတစ်ခုလိုမျိုး ခံစားသမျှ ရေးချနေမိတာလည်း သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး။ အသည်းကွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကြောင့် သိက္ခာမကျရအောင် ဒီလိုတွေဆင်ခြင်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားပါ။ ကိုယ်ချစ်ခဲ့ဖူးတာကိုလည်း တန်ဖိုးမမဲ့ပါစေနဲ့။ ကလေးပိစိလေး မဟုတ်တော့တာကြောင့် မြေကြီးမှာလူးလှိမ့်ငိုသလိုမျိုး ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ အကုန်လုံးဖွင့်ချပြီး ငိုနေလို့ အသည်းကွဲတာ သက်သာမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခါးသီးနာကျည်းစရာလမ်းခွဲမှုမျိုး မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားလိုက်ပါ။
အသည်းကွဲပြီးနောက်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ တော်တော်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဖြစ်သမျှအကုန် လူသိအောင် ရေးနေတော့မှာလား? သူများတွေ ကိုယ့်ကိုယ်သနားလာအောင် ရေးစရာလည်းမလိုသလို မချစ်ချင်တော့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ထိုင်လွမ်းပြနေလို့ကတော့ ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူး။
သူ့အကောင့်ကို သွားသွားကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ဖို့လဲ? သူဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ ခြေရာခံမနေနဲ့။ သိသွားရင် ကိုယ်ပဲ သိက္ခာကျဦးမယ်။ သူ့အကောင့်ထဲကို ဝင်မကြည့်နဲ့၊ Like & comment လည်း လုံးဝမလုပ်နဲ့။ ဘလော့ဖို့လိုလာရင် ဘလော့ပလိုက်။
ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးတာ ရည်းစားဟောင်းရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုရေးပြီး လက်စားချေဖို့မှမဟုတ်တာ။ တကယ်လက်စားချေချင်ရင် ကိုယ်ဘယ်တွေသွားတယ်၊ ဘယ်လိုတွေသာယာတယ်ဆိုတာကိုသာ ပုံတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု တင်နေလိုက်ပါ။